Ciidanka amniga oo ku guuleystay inay fur furaan waxyaabo qarxo oo macmal ah “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ciidanka amniga oo ku guuleystay inay fur furaan waxyaabo qarxo oo macmal ah “SAWIRRO”
Ciidanka booliska iyo Nabad Sugidda oo heegan buuxa ku jiray maalmihii la soo dhaafay ayaa maanta ku guuleystay in ay qarxiyeen waxyaabo macmal ah oo la doonayay in lagu qal qal geliyo amniga caasimadda.
Ciidamada oo si weyn u adkeeyay amniga degmooyinka Gobolka Benaadir ayaa waxa ay gaaf wareeegeen waddooyinka magaalada Muqdisho, iyadoo dadweynuhu ay aad ugu riyaaqeen howsha adag ee ay ciidamadu qabteen.
Goobta shirka uu ka dhacay maanta ayaa waxaa amniga sugayay ciidamo boolis oo si gaar ah u tababaran, waxaana ciidamadu ay howgallo kala ka sameyeen xaafado ka mid ah Muqdisho halkaasi oo ay ku fur fureen waxyaabo macmal ah oo la doonayay in lagu qal qal geliyo amniga.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Qaranka ee Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cismaan oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ciidamadu ay ku guuleysteen in ay furaan waxyaabo macmal ah oo Nabadgelyada lagu qal qal gelin rabay, waxaana uu intaa raaciyay in qaarkood la qarxiyay, iyadoo aan wax dhibaato ah geysanin, isla markaana uu shirka ku soo gabo gaboobay si Nabadgelyo ah.
Afhayeenka ayaa uga mahadceliyay shacabka Soomaaliyeed sida ay ula shaqeeyaan hay’adaha amniga, isagoo ka codsaday in ay sii xoojiyaan la shaqeynta hay’adaha ammaanka, si looga hortago falalka ay maleegayaan dhagar qabeyaasha Shabaab.
Wasiirada Arrimaha dibadda ee IGAD oo si nabadgelyo ah uga dhoofay dalka